FAQs | Ningbo Chinahong Traffic Equipment Co, Ltd.
Chii mutengo wako?
Mitengo yedu inogona kusiyana zvichienderana nekupihwa uye zvimwe zvinhu zvemusika. Mushure mekunge kambani yako yatibata isu kuti uwane rumwe ruzivo, isu tinokutumira iwe yakagadziridzwa yemutengo runyorwa.
Hongu, isu tinowanzoda hushoma hwehuwandu hweodha yekuodha kwepasi rose.
Iwe unogona here kupa inoenderana mhando yemhando data?
Hongu, tinogona kupa zvigadzirwa zvakawanda, kusanganisira bvunzo dhata ongororo yezvinhu mune chigadzirwa;
Ndeipi avhareji nguva yekuendesa?
Kune sampuli, iyo inotungamira nguva ingangoita mazuva manomwe. Zvekugadzirwa kwakawanda, iyo nguva yekuendesa mazuva 20-30 mushure mekugamuchira dhipoziti. Zuva rekusvitsa rinozoshanda mushure me (1) isu tagamuchira dhipoziti yako, uye (2) isu tine yekupedzisira mvumo yechigadzirwa chako. Kana yedu nguva yekuendesa isingakwanise kusangana neyako nguva yekupedzisira, ndapota sangana nezvinodiwa mukutengesa. Muzviitiko zvese, isu tichaedza nepatinogona napo kusangana nezvinodiwa zvako. Kazhinji, tinogona kuzviita.
Ndeipi nzira yekubhadhara yaunogamuchira?
Unogona kubhadhara kuburikidza neakaundi account, Western Union kana PayPal:
30% dhipoziti inobhadharwa pamberi, inova 70% inoenderana nebhalansi yekopi yemutemo wekutakura.
Iwe unovimbisa kuendesa kwakachengeteka uye kwakavimbika kwezvigadzirwa?
Hongu, isu tiri mugadziri, uye kutenderera kunogona kudzorwa pachedu.
Zvakadii nezve mutengo wekutumira?
Mari yekutumira zvinoenderana nekuti unosarudza sei kuwana zvinhu. Kutumira ndiyo mhinduro yakanakisa yehuwandu hwakawanda. Iyo chaiyo yekutumira mutengo, isu tinogona chete kukupa iwe iine ruzivo ruzivo mushure mekuziva huwandu, huremu uye nzira. Ndapota taura nesu kuti uwane mamwe mashoko.
Nzira yekugadzirisa sei chigadzirwa kurongedza?
Kazhinji kutaura, kana paine masheya akawandisa, isu tinotaurirana nekunze kurongedza kwechigadzirwa, uye zviri nani kutizivisa pamberi.
Yakakosha Type Wiper Nereza, Ford Edge Rekupedzisira Wiper Nereza, Bhazi Wiper Nereza YeVolvo, Windscreen Wiper Yemota, Windshield Kumashure Wiper, Yega Wiper Nereza,